सौन्दर्य पेशाको भविष्य सुनिश्चित छ : बरिष्ट सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित | Safal Khabar
सोमबार, ०६ बैशाख २०७८, १२ : ००
काठमाडौं । केही समयअघिसम्म नेपालमा सौन्दर्य व्यवसायलाई खासै राम्रो दृष्टिकोणले हेरिँदैनथ्यो । तर, समय परिस्थितिसँगै व्यक्ति र समाजको सोचमा पनि आमूल परिवर्तन आएको छ । अझ पछिल्ला दिनमा त मानव जीवनको लागि सौन्दर्य सिँगार अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । यसैबिचमा सौन्दर्य पेशालाई मर्यादित तथा उधोगको रुपमा स्थापित गर्न लागिपरेकी बरिष्ट सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।
बिगत २ दशक भन्दा बढी समय सौन्दर्य क्षेत्रमा बिताई सकेकी सोनी कारंजित सौन्दर्य क्षेत्रमा बिज्ञको रुपमा चर्चित छिन । उनले २० बर्ष अघि बाट रोज शिप बिकाश तालिम केन्द्र रवीभवन काठमाडौंको स्थापना गरि ब्यबसायिक रुपमा पार्लर ब्यबसाय सुरु गरेकी थिइन्, अहिले यो पार्लर देशभर स्थापित र परिचित नाम बनिसकेको छ । १० हजार भन्दा बेसी महिला तथा पुरुषहरुलाइ विभिन्न शिप सिकाएर स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाइसकेकी उनले सुरुवाती समयमा निकै कठिन परिस्थितिमा आफूले काम गर्न परेको अनुभब सुनाउछिन। सामाजिक कार्यमा समेत उत्तिकै सक्रिय छिन। उधोग ब्यबसाय, महिला सशक्तीकरण,सामाजिक कार्य र नारि हकहितमा दरिलो खम्बा बनेकी बरिष्ट सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित संग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः
नमस्कार आजभोलि ब्युटी ट्रेनीङ सेन्टरमा नै ब्यस्त छु। सय जना भन्दा धेरै बिद्यार्थीहरु ब्युटिसियन कोर्स, सिलाइ बुनाइ तथा हस्तकलाको प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। त्यसैगरी विभिन्न सेमिनार, प्रशिक्षण, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा निर्णायकको भूमिकामा दिनचर्या बितिरहेको छ।
सुरु सुरुमा सौन्दर्यकर्मीलाइ आम मानिसले राम्रो नजरले हेर्दैन थिए, विभिन्न आक्षेपहरु लगाउने गर्थे तर बिस्तारै समय परिबर्तन हुँदै गयो, मानिसहरुको सोच परिबर्तन हुँदै गयो, अत्याधिक मान्छेहरु पार्लर धाउन थाले, आफ्नो सौन्दर्य प्रति सचेत हुन थाले। अहिले सौन्दर्य कला ब्यबसाय महिला दिदिबहिनीहरुको लागि एउटा मर्यादित पेशा बनेको छ। स्वरोजगार तथा आत्मानिर्भर हुने एउटा दरिलो पाटो भएको छ। त्यसैले अहिले सौन्दर्य कला व्यावसायमा आकर्षण बढेको छ भने अनुहार र शरीरमा देखिएको उसको सौन्दर्यले अन्यलाई आकर्षण वा विकर्षण के गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। यसर्थ मानव जीवनमा र उसको व्यक्तित्वमा सौन्दर्यले ठूलो भूमिका खेलेको पनि हुन्छ । त्यसैले पनि होला अहिलेको अबस्थामा सौन्दर्यकर्मीको माग र इज्जत पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।
मैले आज सम्म १० हजार भन्दा धेरै सौन्दर्यकर्मी उत्पादन गरिसकेकि छु। धेरैलाई स्वरोजगार र आत्मानिर्भर बनाएकी छु। यदि म आत्मा सन्तुष्ट थिएन भने बिगत २ दशक देखि यहि पेशामा आबद्ध हुने थिइन् होला। मलाई हजारौ महिला दिदीबहिनीको आशिर्बाद छ, सबै बिद्यार्थीहरु मेरो लागि समान छन्। उनीहरुको हरेक सुख दुखमा साथ दिने गरेकी छु। देश भरि बाटनै रोज शिप बिकाश तालिम केन्द्र रविभवनमा सौन्दर्य कला सिक्ने आउने मानिसहरुको भिड छ। मैले आज सम्म कमाएको मेरो धन सम्पति ख्याति जे भनेनि मेरो स्टुडेण्टहरु नै हुन्। सौन्दर्य कला क्षेत्रमा लागेर मैले देश विदेश घुम्ने, नयाँ नयाँ प्रबिधि हेर्ने र टेक्नोलोजीहरु सिक्ने मौका पाए। यहि पेशामा लागेर सामाजिक कार्यमा सक्रिय भएको छु, नारि ससक्तिकरणको बिषयमा, महिला स्वरोजगार, आत्मानिर्भरताको बिषयमा आवाज उठाउन सक्ने भएको छु। यस अर्थमा पनि सौन्दर्य(कला क्षेत्रमा लागेर सन्तुष्ट छु।
नयाँ आउने सौन्दर्यकर्मीहरुलाइ के कस्तो सुझाब दिन चाहनुहुन्छ ?
मैले सयौं एकल महिला, पिडित, असाहय तथा निम्नाबर्गका महिला दिदीबहिनीहरुलाइ निशुल्क सौन्दर्यकला, हस्तकला तालिम प्रदान गर्दै आएको छु। धेरैलाइ रोजगारीको अवसर दिएको छु। म एकदम कोमल हृदयको महिला हुँ, अरुको दुख पिडा देख्न सक्दिन। हामि सामाजिक प्राणि भएर जन्मे पछि समाजको लागि समेत ठोस योगदान पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तसर्थ मैले विभिन्न माध्यम बाट आफुले सक्ने सहयोग गर्दै आएकी छु। लकडाउनको समयमा खाना वितरण देखि राहत वितरण सम्मको कार्यहरु गरेको छु। मानिस आफैले चाहेर कोहि पनि अनाथ र गरिब हुने होइन त्यसैले आफुले आर्जन गरेको रकम बाट केहि प्रतिशत सामाजिक कार्यमा लगाउने गरेकी छु। अरुको लागि बाच्नुमा पनि आत्मासंतुष्टि मिल्छ। धन्यबाद !
#सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित